Global Voices teny Malagasy » Manorisory Olo-Tsotra ny Polisy ao Kerala, India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Janoary 2013 9:53 GMT 1	 · Mpanoratra Inji Pennu Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Jyoti Singh Pandey , ilay zazavavy niady mafy ny ho velona taorian'ny fanolànana mahery setra izay nitarika azy ho amin'ny fahafatesana no mety ho Susana Trimarco  (ilay reny Arzantiniana izay nahatonga ny fanovàna ny lalàna momba ny fanondranan'olona tany Arzantina) an'i India.
Tao amin'ny tafatafa nifanaovana tamin'ny Zee news  no nanomezan'ny naman'i Jyoti ny antsipirihan'ny zava-nitranga tamin'iny alina mampihoron-koditra iny, sy ny fahelan’ ny fahatongavan'ny polisy sy ny fitondram-panjakana  tao Delhi. Nampangaina avy hatrany  noho ny famoahana anaran'olona sy ny fandefasana ny tafatafa ny Zee news.
Raha ao anatin'ny Firenena Goavana G20 i India dia mijoro ho faharoa ratsy indrindra  eo amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Tsy hoe tsy manana lalàna ampy hiarovana ny olo-pireneny ny demokrasia Indiana, fa ny mahavoa azy dia ny fitondra-tenan'ny fitondram-panjakana.
Nanoratra ny zava-nahazo azy  fony nitsidika an'i Kerala avy any Bhutan i Sharon Rani. Niaraka tamin'ny namany nandany ny takariva tao an-tanànan'i Kochi ahitana olona avy amin'ny fokom-pirenena maro tao Kerala izy indray mandeha. Tamin'ny alalan'ny fanontaniana azy izay toerana niaviany no nanontanian'ny polisy miakanjo sivily azy tamin'ny resaka ara-pananahana miharihary ny fifandraisany amin'ny namany sady manorisory azy am-bava.
Namaly io lahatsoratra io i Shahina Nafeesa ,
Tany Mavelikkara, tanàna iray hafa any Kerala, nisy a similar incident was tati-baovao  mitovy amin'izao ihany koa izay namotoran'ny polisin'ny Kerala zazavavy 10 sy 16 taona ny fiainana ara-pananahan'izy ireo. Ny tena nakàna ireo ankizy ireo anefa dia ny hanontaniana ny fiheverana ho fandraisana anjaranny ray aman-dreniny ao amin'ny antoko Maoista voarara.
Miteny i Madhu Soodanan :
Manohy i Girish Kumar ,
Nisy ihany koa ny fitateram-baovao fa mpivady ao an-tanànan'i Alappuzha  no tohintohinin'ny polisy amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izany. Manontany i Jai Krishnan ,
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/15/44378/
 polisy sy ny fitondram-panjakana: http://zeenews.india.com/news/nation/delhi-gang-rape-govt-rapped-for-failure-to-provide-ambulance-to-victim_821610.html
 Nampangaina avy hatrany: http://www.niticentral.com/2013/01/zee-news-charged-with-disclosing-identity-of-delhi-assault-victims-friend.html
 faharoa ratsy indrindra: http://in.reuters.com/article/2012/06/13/g20-women-india-idINDEE85C00120120613
 Nanoratra ny zava-nahazo azy: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=598957910120044&set=a.598956926786809.149793.100000175207278&type=3&theater
 mpivady ao an-tanànan'i Alappuzha: http://www.indiavisiontv.com/2012/12/14/146150.html